Iyo Yakakura Kwazvo Kushambadzira Tekinoroji Yakambove | Martech Zone
Iyo Yakakura Kwazvo Kushambadzira Tekinoroji Yakambo
Chitatu, Kukadzi 24, 2010 Mugovera, June 27, 2015 Douglas Karr
Dhizaini dhizaini: huropi
Kwete, handina chekukutengesa. Asi, ini ndoda kukuyeuchidza nezve chokwadi chakadzama chaungave wakanganwa: kuti chishandiso chakasimba kwazvo chekushambadzira bhizinesi rako zvinobudirira ndechimwe chauinacho kare. Ndiyo injini yepamusoro yepasirose yepasi rose - uropi hwako.
Iko kufona kuti unyatso shandisa yako wega noggin ndiyo imwe yatinonzwa nguva dzese. Ndozvinotaurwa nevabereki nevadzidzisi kuvana, izvo zvinonetsekana mamaneja kune vashandi uye izvo vatengi vakatsamwa vanotaurira vatengesi vavo. Saka yambiro yekare kuna FUNGISA ingatibatsire sei nehunyanzvi hwekushambadzira? Kuti tipindure mubvunzo iwoyo, tinofanirwa kudzokera kune zvekutanga.
Chii chinonzi Kushambadzira? Chii chinonzi Technology?
kunyange zvazvo Martech Zone izere nemafungiro akajeka ekuvandudza kushambadzira kwepamhepo uye zvigadzirwa zvinoshamisa zvekuwedzera kushandurwa, hapana kumbove nekukurukurirana kwakawanda pamusoro peizvo mazwi "kushambadzira" uye "tekinoroji" chaizvo zvinoreva. Kunyora yako dudziro inzira huru yekufunga zvakajeka. Hezvino izvo zvandinofunga nezve aya mazwi:
Marketing - Iyo kupihwa kwe ruzivo rwakakodzera nezve zvigadzirwa zvako, masevhisi uye chiratidzo kune vateereri vanogona vatengi nevamiriri.
Technology - Iko kushandiswa kwesainzi uye pfungwa kune imwe nzira kuitira kutyaira systemic kuvandudza mukugadzirwa.
Sezvinei nekutsanangurwa kupi, pane zvakawanda kupfuura chirevo kupfuura iwo mazwi. Asi cherekedza kudhinda kwandaishandisa: Kushambadzira kuri nezve urongwa, nepo tekinoroji iri nezve kunyoresa. Izvi zvinoreva kushambadzira ndechimwe chinhu chaunofanirwa kusheedza, corral uye chidhori kuenda kunzvimbo chaipo, uko sezvo tekinoroji iri pamusoro pekuisa zvidimbu pamwechete.
Zvinoenderana netsananguro dzangu pachangu, iyo Tarisa zvekushambadzira zvakasiyana zvakanyanya pane kutariswa kwetekinoroji. Isu tinofanirwa kunge tichishandisa kushambadzira senzira yekusvikira kune vangangove vatengi uye vanotsigira. Asi tekinoroji inofanirwa kukonzeresa kuvandudza kunoyerwa kuburikidza nekushandisa sisitimu.
Patinoisa iwo maviri mazwi pamwechete, tekinoroji yekushambadzira inofanirwa kuve yakatarisa kune vateereri uye zvakarongeka. Nemafungiro iwayo, mazhinji emabasa edu ebhizinesi anouya mukutarisisa. Nekungoona chete kuti zviitwa zvedu zvinowirirana sei netsananguro dzedu, tinogona kuwana pfungwa yekuti nei kushambadzira kwedu tekinoroji kungave kuri kubudirira kana kukundikana.
Masystem akanaka, vateereri vasiri ivo
Iwe unotarisa kadhi rega rega rebhizinesi iwe raunopinda mune yako email email dhatabhesi uye wotanga kutumira iwo mameseji ipapo? Kana zvirizvo, izvo zvinoreva kuti iwe une inonakidza sisitimu yekugadzirisa makadhi ebhizinesi. Asi ini ndinotengesa mitengo yako yakavhurika yakaderera uye unowanzozvinyora Izvi zvinodaro nekuti yega yega bhizinesi kadhi iwe unowana pamwe haaiti inomiririra vateereri chaivo vechigadzirwa chako. Uri kushandisa chishandiso chikuru asi nevanhu vasiri ivo.
Vateereri chaivo, hapana masisitimu
Iwe unoenda pane inonakidza yekutengesa mafoni nevakasimba vakwikwidza asi unokanganwa kutevera? Unofanirwa kunge uchiita kushambadzira kwakanaka kwazvo kuti uwane vanhu ivavo, kungave kuburikidza nenetiweki, kushambadzira kana zvimwewo zviwanikwa. Asi kana iwe usinga shingaire nezvekuita inotevera kufona kuti uvhare chibvumirano, iwe hauna yakavimbika yekutengesa system. Iwo makuru anotungamira munyika haana maturo kana iwe usati wambonyatso kusaina chibvumirano.
Nguva yePop Quiz
Heano kumwe kutadza kwekushambadzira tekinoroji yandakasangana nayo muvhiki rapfuura. Zviri nyore kuona kuti nei vaine matambudziko. Ona kana iwe uchigona kuona kuti chii kutadza kwakakonzera dambudziko. (Sarudza chinyorwa pakati pesezvizvi] pamhinduro.)
Wapa mapepa kuitira chiitiko chako chiri kuuya chekutaura, asi hauna kusanganisira nzvimbo yacho [low tech kutadza: iwe unoda mucherechedzo wekugadzira mapepa]
Iwe wakandipa kadhi rebhizinesi rekambani yako yepasirese yewebhu kushambadzira, asi yako email kero ine Hotmail [kushambadzira kutadza: iwe unofunga kuti vateereri vako havazive / vane hanya nezvechokwadi zita rezita]
Yako voicemail inobvunza mibvunzo miviri: Ndanzwa nezve sevhisi yako? Kana, ini ndatova nhengo ine mibvunzo nezve? [kushaya kwekushambadzira: wabatanidza vateereri vaviri vakasiyana mumusika mumwe]
Pane chiitiko che network, iwe unovimbisa kunditumira ruzivo gare gare musi iwoyo asi usanyora pasi. Handimbonzwa nezvako. tech kutadza: hauna maitiro ezvinyorwa]
Albert Einstein anonzi akambotaura kuti "Matambudziko akakura atinotarisana nawo haakwanise kugadziriswa nepfungwa imwechete yakavagadzira." Kana iwe uchida kugadzirisa ako ekushambadzira matekinoroji matambudziko, dzokera kune ekutanga ekufunga zvakajeka. Ongorora tsanangudzo dzako. Ratidza kuti chii chauri kutadza kuitira kuti utange kuita zvinhu nemazvo.
Tags: teknolojia yepamusoroubongoTechnology
Iwo mashanu Anobatsira maPosvo mune chero Musika
Simba reKusarudzika muEndaneti Kushambadzira
Kukadzi 24, 2010 na3:56 PM
Once again I’m in chronic agreement with Robby.
When I read these post, I usually think about how I can use them to market, and vice-versa
Mar 4, 2010 pa 11: 46 PM
Great job bringing us back to basics!